China Water Treatment Project Abaphakeli abakhiqizi | Joysun
Water Treatment Project Isingeniso 1. umthamo ukukhiqizwa ukwelashwa amanzi ethu project itholakala kusukela 1T / H ukuba 1000T / H. 2. Amanzi wethu impatho phrojekthi ikakhulukazi kuhlanganisa ithangi zokusetshenziswa kwamanzi, ukuhlunga multi-medium, esebenzayo carbon lemifanekiso, sezingubo, ukucacisa lemifanekiso, ithangi lamanzi Lesisemkhatsini, RO uhlelo noma UF uhlelo, ithangi lamanzi cleanout, UV Sterilizer, noma indawo generator, ithangi lamanzi esibulalayo . 3. Lokhu amanzi imishini yokwelashwa ingatholakala exhunywe ne umshini ukugcwaliswa olunikezwa kithi. 4. Ngokusho ...
1. umthamo ukukhiqizwa ukwelashwa amanzi ethu project itholakala kusukela 1T / H ukuba 1000T / H.
2. Amanzi wethu impatho phrojekthi ikakhulukazi kuhlanganisa ithangi zokusetshenziswa kwamanzi, ukuhlunga multi-medium, esebenzayo carbon lemifanekiso, sezingubo, ukucacisa lemifanekiso, ithangi lamanzi Lesisemkhatsini, RO uhlelo noma UF uhlelo, ithangi lamanzi cleanout, UV Sterilizer, noma indawo generator, ithangi lamanzi esibulalayo .
3. Lokhu amanzi imishini yokwelashwa ingatholakala exhunywe ne umshini ukugcwaliswa olunikezwa kithi.
4. Ngokusho ezahlukene ejwayelekile wayefisa manzi ahlanzekile kanye nezinga lamanzi eluhlaza, ngezifiso amanzi amaphrojekthi ukwelashwa eqondile yohlelo lokusebenza ziyatholakala futhi nathi.
5 Sinikeza iwaranti unyaka owodwa zonke zethu imishini kwemanti kanye nalesinye ngamasevisi kanye izingxenye ezisele mahhala ngesikhathi sewaranti.
Joysun kuyinto ukwelashwa amanzi China iphrojekthi nomkhiqizi nabaphakeli. Sine engaba ngu-15 nakho ekwenzeni plastic ukucutshungulwa imishini kanye ukukhiqizwa isiphuzo imigqa sokuphuza izimboni amanzi kanye isiphuzo. Ngaphezu ukwelashwa amanzi iphrojekthi, singakwazi futhi inikeze ezinye izixazululo like PET preform ukukhiqizwa umugqa, cap ukukhiqizwa umugqa, ibhodlela ukukhiqizwa komthetho, umthetho ukukhiqizwa isiphuzo, ukwelashwa kwamanzi iphrojekthi, njll Sicela ugcine ukuphequlula noma uxhumane nathi ngqo, futhi thina kuzokusiza thola best amanzi ukwelashwa iphrojekthi funa yakho ethize!
Previous: Nciphisa Film Goqa Packing Machine
Okulandelayo: PET Preform Production Line
Roots Intulo Umshini Pump Setha
Single Isiteji rotary Vane Umshini Pump Setha
Umshini Ukupakisha Machine, Carbonated Beverage Production Line, Okuzenzakalelayo Isiphuzo Ukugcwalisa Machine, Aluminium Ucwecwe Umshini Ukupakisha Machine,